‘झिमिक झिमिक झ्याप्प’ अँध्यारोमै जे हुन्छ ! | Screennepal
‘झिमिक झिमिक झ्याप्प’ अँध्यारोमै जे हुन्छ !
२०७५, २७ जेष्ठ आईतवारscreennepalfeature, Offbeat0
अहिले थिएटर भिलेज र थेम्स ईन्टरनेशनल कलेजको सहकार्यमा मण्डला थिएटरमा नाटक ‘झिमिक झिमिक झ्याप्प’ मञ्चन भइरहेको छ । यो नाटक केही दिायता नियमित मञ्चन हुँदै आएको हो ।
यस नाटक बेलायती नाटककार पिटर स्याफरको नाटक ‘ब्ल्याक कमेडी’मा आधारित नेपालीकरण गरिएको हो । थिएटर भिलेजमा आवद्ध नियमित अभिनय र निर्देशन गरिरहेका दीलिप रानाभाटको निर्देशनमा तयार भएको यस नाटक ३ असारसम्म नियमित मञ्ण्चन हुने जनाइएको छ ।
नाटकमा आफ्नी प्रेमिकाको बाबु र एउटा धनाढ्य आर्ट कलेक्टरलाई ईम्प्रेस गर्नका लागि एउटा युवा कलाकारले साथीको कोठाबाट साथीका दुर्लभ र महँगा समाग्री चोरेर ल्याउँछ । उसको घरमा एक्कासी बत्ती जान्छ । त्यसपछि नाटकमा जेजति रोमाञ्चक घटना घट्छन् । ती सबै अँध्यारोमै घट्छन् ।
वर्तमान समाजमा आधुनिकताको खास्टो ओढेर मान्छेले एक अर्कालाई कसरी झुक्याइरहेका छन् र त्यसले गर्दा सम्बन्धहरु कसरी भत्किरहेका छन् भन्नेमा नाटक केन्द्रित छ । मान्छेका सम्बन्धमा देखिने खोक्रोपनामा समाज र राजनीतिको कस्तो भुमिका रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि नाटकमा कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।
आयुष्ना गिरी, एचके अधिकारी, प्रशंसा पौडेल, सन्देश मोटे शाक्य, आयुष्मान प्याकुरेल, प्रस्तुति भट्टराई, श्रवणकुमार राना र बिपिन रिमालको अभिनय रहेको यस नाटकमा साजनकुमार सुनुवार र सुशान श्रेष्ठ निर्देशन सहयोगी रहेका छन् । उमेश तामाङको प्रकाश रहेको नाटकलाई दीलिप रानाभाट र आलोक लम्सालले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
Previous Postतस्बिरमा फेसन नोभा–२०१८ (फोटोफिचर) Next Postराजधानीमा तनहुँ तमु समाजको ‘घाटु खोय’ (फोटो फिचरसहित)